Yintoni edla iityuvane zaselwandle?
Iinqununu zolwandle zinamaqoqo ezinzima (ezibizwa ngokuba yi-carapaces) ezibanceda ukuzikhusela, kodwa zinezilwanyana. Baye basengozini ngakumbi kuneentlanzi zasemhlabeni ngenxa yokungafani neentlanzi zasemhlabeni, iifolishi zasolwandle azikwazi ukuphelisa iintloko zawo okanye iintloko zazo.
Abaxhamli bee-Eggs nee-Hatchlings
Kukho ezinye izilwanyana zasolwandle njengabantu abadala, kodwa ezi ziqhumane zasemanzini zithinteka xa zisuka kwiqanda kunye neenqanawa (ii-turtles ezincinane zisanda kuvela kwiqanda).
Abaxhamli bamaqanda kunye neenqanawa ziquka izinja, amakati, ama-raccoons, amathumba, kunye nezikhumba zenyama. Ezi zilwanyana zinokubamba iindlwana zaselwandle ukuze zifike kumaqanda, nokuba ngaba isidleke sinamibini engaphantsi kwentlabathi. Njengoko iziqhamo ziqala ukuvela, kukho ivumba leqanda elisekhona emizimbeni yabo, kunye nevumba lehlabathi elimanzi. Ezi zivumba ziyakuthi zifunyanwe zizilwanyana kude kube kude.
Ngokutsho kweGeorgia Sea Turtle Centre, izinto ezisongela ii-turtles zaseGeorgia zibandakanya oku ngasentla, kunye neenkukhu ezinomlilo kunye neentsontsho zomlilo , ezingasongela zombini iiqanda kunye neenqanawa.
Xa ama-hatchlings ephuma kwiqanda, kufuneka afike emanzini. Ngeli nqanaba, iintaka ezinjengeengqungquthela kunye nobusuku bezilwanyana zingasongela. Ngokutsho kwe-Sea Turtle Conservancy, njengoko bambalwa kwiiqanda elinesishumi elingu-10 000 zamaqanda ama-turtle afikelela kubantu abadala.
Iinqaba ze-ridley turtle kumaqela amakhulu abiza i- arribadas . Ezi ziza zikwazi ukutsala izilwanyana ezinjengama-vultures, ama-coati, ama-coyotes, amajagu nee-raccoons, abangabuthela kufuphi nxwemeni nangaphambi kokuba i- arribada iqale.
Ezi zilwanyana zimba izidleke zize zidle amaqanda kunye namaxhoba kubantu abadala.
Abaxhamli beeNkqalazo zoLwandle lwaBadala
Xa ama-turtles afaka indlela eya emanzini, amabini kunye nabantu abadala bangabanjelwa izilwanyana kwezinye izilwanyana zaselwandle, kuquka i- sharks (ngakumbi i-tiger sharks), i- orcas (i-whale) kunye nenhlanzi enkulu, njenge-grouper.
Ulwandle lwamanzi luyakhelwe ubomi kumanzi, kungekhona kumhlaba. Ngako-ke abantu abadala banokungabikho nengozi kwizilwanyana ezinjengezinja kunye ne-coyotes xa bekhuphuka kwiindawo eziselunxwemeni.
Iinguqu zoLwandle kunye nabantu
Ukuba ama-turtles aphila kwiimfuyo zabo zendalo, basenabantu abasongela abantu. Ukuvuna kwenyama, ioli, izilwanyana, isikhumba, kunye namaqanda awanqumla abantu abahlala kwezinye iindawo. Ulwandle lweentlanzi lubhekene nophuhliso lwamabhantshi abo asemvelo, oku kuthetha ukuba kufuneka bahlangabezane nezinto ezinjengokukhanya okubonakalayo, kunye nokulahleka kweendawo zokuhlala kunye neziza zokuhlalisa ngenxa yokukhutshwa kommandla kunye nokukhukhula komhlaba. Iinqanawa zifumana indlela eya elwandle zisebenzisa ukukhanya kwemvelo, umthamo wolwandle, kunye nezandi zentuthuko yolwandle kunye nolunxwemeni zingaphazamisa ezi ziqulatho kwaye zenze iinqanawa zinyuka ngendlela engafanelekanga.
Iingqungquthela zikwabanjiswa njengendlela yokuloba kwinqwelo yokuloba, eyayiyinkinga enokuthi ifakwe iifowuni ezingabandakanyiyo, ngaphandle kokusetyenziswa kwazo.
Ukungcola okunjengokugqithiswa kolwandle kunesinye isongelo. Iibhaluni ezilahliweyo, iibhegi zeplastiki, i-wrappers, umgca wokuloba kunye nokunye udoti kunokuphambuka ngumbhobho wokutya kwaye uphelelwe ngengozi, okanye i-tortle ingangena. Iifudu ziya kuhlaselwa ngamanqanawa.
Indlela Yokunceda Iinguqu Zolwandle
Ubomi bentlanzi yobomi lunokuba neengozi. Unokukunceda njani?
Ukuba uhlala kwindawo yonxweme:
Ungaziveki ngezilwanyana zasendle - unokutsala amaxhoba.
Ungavumeli ukuba inja yakho okanye ikati iqhume.
Jonga iinqununu zolwandle xa uhamba ngesikebhe.
Musa ukuphazanyisa okanye ukhanyise izibane ezikufutshane neentlanzi zolwandle.
Vala ngaphandle, izibane ezijongene nolwandle-ngethuba lokuloba kwexesha lokuloba.
Thatha ilitha echwebeni.
Nomaphi ohlala khona:
Ukulahla udoti ngokufanelekileyo, kwaye ugcine isiqhekeza kwisitya sakho xa ungaphandle. Udoti kude kude nolwandle luyakwenza ukuba kufike apho.
Ungalokothi ukhulule ibhaluni - uhlale uphawula kwaye ulahlwe kuwo. Sebenzisa iibhaluni ezinye iindlela xa kunokwenzeka kwimibhiyozo yakho.
Ukuba udla inyama yokuloba, yenza uphando malunga nento oyidlayo kwaye udle inyama yokutya yasekuhlaleni ebanjwe ngaphandle kokusongela iinqanawa.
Ukuxhasa ulondolozo lwamanzi olwandle / imibutho yokuvuselela, kuquka nakwamanye amazwe. Iinqununu zolwandle ziyafuduka kakhulu, ngoko ukuphulukiswa kweentlanzi kuxhomekeke ekukhuselweni kuyo yonke indawo yokuhlala.
Izikhokelo kunye nolwazi olongezelelweyo:
I-Network yoThuthulo lweLwandle olusengozini. Kufumaneke ngoMeyi 30, 2013.
I-Sea Turtle Conservancy. Ukusongelwa koLwandle lweNkqantosi: Iindidi eziHlangayo. Kufumaneke ngoMeyi 30, 2013.
Spotila, JR 2004. Iinguqu zoLwandle: Isikhokelo esigqibeleleyo kwiBiology, ukuziphatha kunye nokuLondolozwa kwazo. I-Johns Hopkins University Press: IBaltimore kunye neLondon.
I-Georgia Sea Turtle Centre. Iisongelo zokuThuthuka kweLwandle. Kufumaneke ngoMeyi 30, 2013.
Iimnandi NgeeHarit Crabs
Amaqiniso Anomdla NgamaProgmy Seahorses
Iintlobo zezilwanyana zasemanzini
I-Giant Siphonophore kunye neNinzi yeziLwandle eziLwandle eziPhezulu kakhulu
Ziziphi iimpawu ze-Squirt Sea?
Iintambo zengqungquthela: i-US Engineering Solutions
IiPolonium Facts - Element 84 okanye Po
I-Metallic Bond - Inkcazo, iimpahla kunye nemizekelo
'Umgcini weNdlovu kaMphathiswa' - Indaba emfutshane
Interfaces kuDelphi Programming 101
Biography ka-Aileen Hernandez
IYunivesithi yaseHouston GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Yintoni engamele ndiyize eKholeji?
Iimpawu Eziqhakamshelayo Ngeentlobo